China PI Heater Film (Filim khafiif ah PCB) soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Xinhui
PI filimka kuleylka korontada
Filimka Polyimide PI filimka kuleylka korantada wuxuu ka samaysan yahay filim polyimide sida insulator-ka dibadda iyo nikkel-chromium alloy etching xaashida kuleylka sida jirka kuleyliyaha gudaha, kaas oo lagu sameeyay heerkulka sare iyo isku-xidhka kulaylka cadaadiska sare.Filimka kuleylka korantada ee polyimide wuxuu leeyahay awood koronto oo heer sare ah, awood koronto oo heer sare ah, hufnaanta kulaylka wanaagsan, iyo xasilloonida iska caabbinta, sidaas darteed waxaa si ballaaran loo isticmaalaa goobta kuleylka korantada.
◆Dabacsanaan wanaagsan, dabacsanaan, kuleyl degdeg ah oo degdeg ah iyo nolol adeeg oo dheer.
◆Ultra-dhuuban: dhumucdiisu waa 0.3mm oo keliya, oogada waa fidsan tahay, meeshuna waa yar tahay, radius foorarsigu waa qiyaastii 5mm.
◆ Noocyo kala duwan: qaybo yaryar oo kala duwan ayaa laga samayn karaa wareegga wareegga.
◆ Kuleyl labbis: qaabka wareegga habka etching waa lebis, kulaylka inertia waa yar yahay, waxay la xiriirtaa jirka kulaylka dhow, iyo xawaaraha kuleyliyuhu waa degdeg.
◆Si sahlan loo rakibo: oo leh cajalad laba-geesood ah, si toos ah ayaa loogu dhejin karaa dusha sare ee jirka kulul.
◆Nolol dheer: nakhshad fidsan, culeys yar oo koronto ah marka loo eego kuleyliyeyaasha siliga kale, iyo nolosha adeeg dheer.Dahaarka wanaagsan.
◆ Heerkulka sare iyo tijaabada cadaadiska sare: Waxaa la isticmaali karaa waqti dheer at 200 ℃.Oo gudbay tijaabada tamarta sare ee 1500V.
◆Dahaarka iyo lakabka kulaylka: filim polyimide
◆ Xuddunta kuleyliyaha: gabal kululaynta nikkel-chromium alloy etching
◆ Dhumucdiisuna: qiyaastii 0.3mm
◆Awood cadaadis leh: 1500v/5s
Heerkulka shaqada: -60-200 ℃
◆ Danab dibadda ah: baahida macaamiisha
◆Awoodda: waxaa loo qaabeeyey si waafaqsan deegaanka isticmaalka alaabta
◆ leexashada awoodda: <± 8%
◆Xoogga xajinta ledhka: >5N
◆Awoodda xabagta ee xabagta:>40N/100mm
Kala duwanaanshaha codsiga
1. Qalabyada falanqaynta sayniska, sida: waxay bixiyaan ilo heerkul joogto ah oo loogu talagalay kuleyliyaha kulaylka (ama kuleylka kuleylka kuleylka) tijaabiyaha, qalabka caafimaadka, iwm, si loo dejiyo heerkulka hawlgalka ee qaybaha optoelectronic.
2. Deegaanka qabow qoto dheer, ka dhig qalabka iyo qalabku inay gaadhaan heerkul shaqo oo badbaado leh.Tusaale ahaan: qalabyada iyo qalabka sida dayax-gacmeedka, baabuurta hawada sare iyo diyaaradaha, iyo sidoo kale qalabka loo isticmaalo meelaha loolka sare, iyo qalabka ka hortagga heerkulka hooseeya, sida akhristayaasha, muraayadaha dareeraha ah, LCD-yada iyo qalabyada kale.
3. vacuum kuleylinta iyo goobta dubista.
4. Kuleylinta digsiga saliidda baabuurta, xaashida baraf ka saarista muraayadda gadaal-u-fiirinta, ka-saarista barafka iyo qaboojinta walxaha kuleylka anteenada ama raadaarka.
5. Warshadaha daryeelka caafimaadka iyo qalabka qurxinta.
Hore: Filim kuleyliyaha PET (PCB dabacsan)
Xiga: LCM (LCDModule) Soo-saare/Sareyaal